ကြေးဝါဂိတ် Valve China Manufacturers & Suppliers & Factory
ကြေးဝါဂိတ် Valve - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ကြေးဝါဂိတ် Valve ထုတ်ကုန်များ)
Chrome ပန်းကန် Angle Valve ကို
ချည်အရောင်နှင့်အတူ Chrome plating angle valve
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်ဖိအား: 1000 Psi (7.0 mpa) စီးရီး...
နီကယ် plating angle valve
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 8 bar မှ 10 bar သို့ WOG...
Tee MALE ကြေးဝါကိုစစ်ဆေး Valve
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ ၁၁၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီယူးအထိ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 16 bar ကနေ 25 bar ကိုမှ အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်: -20 မှ 110...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 °
F * F ကြေးဝါဂိတ်အဆို့ရှင်
1/2 မှ4အထိအရွယ်အစား ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 16 bar ကိုကနေ 25 ဘားမှ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား။ 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 4. WOG (water.oil.gas) 5. Stuffing box ကို PTFE ။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၁၁၀ ဒီဂရီအထိအပူချိန်။ 7. ခြယ်လူမီနီယံ handwheel...
အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ ၃ အထိ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား: 16 ဘားမှ 25 ဘားရန် 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၁၁၀ ဒီဂရီအထိအပူချိန်။ 7. သံမဏိခြယ် handwheel ။ 100% Air...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ ကျပ် ၃၂၀၀ ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ2", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2",21/2 ", 3",4" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား 16 bar, Nax.working ဖိအား 25bar ။ 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT...
ကြေးဝါ Mini Ballve Valve 3/8 "X3 / 8"
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8648 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 3/8â€ ?? X3 / 8 အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4. သံမဏိလီဗာလက်ကိုင်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း။...
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါ Bibcock Valve
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8112 ကြေးဝါဘောလုံး နှင့်အတူ Bibcocks ရေပိုက် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ€To1âမှ ?? အင်္ဂါရပ်များ: ၁။ Bibcock ဘောလုံးကိုအပေါက်ဖောက်ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (BSP) ချည်အထီးဝင်ပေါက် acc / ISO 228/1 ။...
Hose Union နှင့်အတူ Bibcock Ball Valve
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8110 ကြေးဝါဘောလုံး နှင့်အတူ Bibcocks ရေပိုက် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ€To1âမှ ?? အင်္ဂါရပ်များ: ဆက်သွယ်မှုကိုရေပိုက်မှ 1. Bibcock ဘောလုံးအဆို့ရှင်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (BSP) ချည်အထီးဝင်ပေါက် acc / ISO 228/1 ။...
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် KS-327A ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ ၂.၃ / ၄ ~ ၄ " အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ ၃။ NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B သို့ ၁.၂.၁ အဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ 0...
ကြေးဝါဂိတ် Valve ကြေးဝါရေပန်း Valve ကြေးဝါမှုတ်ချ Valve ကြေးဝါထည့် ကြေးဝါဂဟေဆော် Stop Valve ကြေးဝါကိုစစ်ဆေး Valve သပ်ဂိတ် Valve ကြေးဝါရေ Faucet